वार्षिक साधरणसभा तथा पुस्तक विमोचन सम्पन्न
कोमल श्रेष्ठ मल्ल -
कामाड । नेपाली साहित्य विकास परिषद्, नेपाल च्याप्टरको वार्षिक साधारणसभा काठमाडौँमा एक भव्य समारोहबीच सम्पन्न भयो । साधारणसभामा संस्थाका अध्यक्ष साहित्यकार इल्या भट्टराईको नियात्रा संग्रह ‘म साँच्चिकै हराइछु’को पनि विमोचन भएको थियो ।
समारोहका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.विष्णुविभु घिमिरेले इल्या भट्टराईको कृति बेलायत र नेपालबीच सेतु बन्न सक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष इल्या भट्टराईले संस्थाले गरेका क्रियाकलाप तथा गतिविधिबारे प्रकाश पारिन् ।
त्यस्तै कृतिमाथि समीक्षा गर्दै समालोचक महेश पौड्यालले नियात्रा कृति उत्कृष्ट रहेको भन्दै नारी नियात्राकार अत्यन्त न्यून रहेको अवस्थामा यस्तो सबल पुस्तक नारी हस्ताक्षरबाट आएकोमा प्रशंसा गरे । समारोहमा अर्का समालोचक डा.गोविन्दराज भट्टराईले नियात्रा कृतिले बेलायतको समाज र संस्कृति नेपाली परिवेशसँग तुलना गर्दै लेखिएकोमा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । सभामा डा.माधवी भट्टले आफ्नो मन्तव्य राख्दै साधारणसभाको प्रगतिको लागि शुभकामना व्यक्त गरे ।
साधारणसभामा संस्थाका महासचिव हरिशरण लामिछानेले नेपाली साहित्य विकास परिषद् नेपाल च्याप्टरका तर्फबाट आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । त्यसै गरी संस्थाका सल्लाहकार तथा संयोजक वरिष्ठ कवि गोपाल पराजुली, डा.प्रभा कैनी तथा डा. रेणुका थापाले संस्थाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए । साधारणसभाको बन्द सत्रमा संस्थाका कोषाध्यक्ष मुक्ति घिमिरेले आर्थिक वर्षको आय–व्ययको विवरण पेस गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सत्य निरूपण आयोगका माननीय सदस्य माधवी भट्ट, डा.देवीप्रसाद सुवेदी, प्रा.डा ज्ञानू पान्डे, प्राज्ञ वियोगी बुढाथोकी, साहित्यकार ध्रुव, निमा वाङग्देल लामा, सापकोटा, चन्द्रप्रसाद भट्टराई, पवन आलोक, मुकुन्द न्यौपाने, तारा के.सी, प्रभा भट्टराई, रूद्र अधिकारी, कवि दीपेन्द्रसिंह थापा, इ. दीपक भट्टराईलगायतको उपस्थिति थियो । शिवपुरी सन्देश परिवार नेपाली साहित्य परिषद्को उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गरेको थियो ।
स्मरण रहोस्, नेपाली साहित्य विकास परिषद् बेलायतमा २०५१ मा स्थापित जेठो नेपाली साहित्यिक संस्था हो । हाल संस्थापक साहित्यकार कवि सुरेशजंग शाह अध्यक्ष छन् ।